Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Bahamas » Agwaetiti The Bahamas na Homesick Launch Candle Edition Limited iji kpalie Wanderlust oge oyi a.
Foto sitere n'aka Bahamas Ministry of Tourism
Mmekọrịta na-ebute Vibes Island kwụ ọtọ n'ụlọ ndị mmadụ; gbakwunyere Onye mmeri kechioma ga-emeri mgbapụ kacha elu na Bahamas
Maka oge mbụ, enwere ike ibuga ndị njem na Bahamas ozugbo site na ebe obibi ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla. Ndị Bahamas na Homesick agbakọtala ọnụ iji wepụta kandụl “Bahamas” nwere ntakịrị mmụọ sitere na ọnọdụ okpomọkụ na-ekpo ọkụ, ọdịbendị pụrụ iche na ụsọ osimiri ọcha na-adịghị mma. Iji mee ememe na kpalie ndị na-azụ ahịa ka ha mee atụmatụ ma ọ bụ nyochaa njem ha na-esote, duo na-eme ka ọ dịkwuo mfe iweta ísì ụtọ ndụ site n'inye onye mmeri nwere chi ọma ụzọ mgbapụ na njedebe.
Nkwekọrịta ahụ bụ ngwakọta na-enweghị nkebi nke nkwụghachi azụ Bahamas na-enye ndị njem na-agụsi agụụ ike maka mgbapụ agafee na ebumnuche Homesick iji ike na-esi ísì ụtọ jikọọ ndị mmadụ na ebe na oge kachasị mkpa. Kandụl ahụ ewepụtara ọhụrụ na-asọpụrụ obodo ahụ nke nwere ísì ụtọ okpomọkụ nke nwere ndetu ndị a:
Pineapple ọkara na-echetara ubi painiapulu mara mma nke Eleuthera
Mmiri oyibo mmụọ nsọ sitere n'ọbụ aka aki oyibo achọtara n'agwaetiti Out nke obodo
Na nnu senti nke ikuku mmiri nke na-adọta ndị mmadụ si gburugburu ụwa ka ha nweta ahụmahụ ahụ turquoise hued mmiri na aja pink
"Wanderlusters daydreaming nke njem ha ọzọ na Bahamas ga-anụ ụtọ kandụl ọhụrụ," Latia Duncombe, onye na-arụ ọrụ Director General nke Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation kwuru. "Ndị mmekọ anyị na Homesick meziri ísì ọma nke na-echetara obodo agwaetiti anyị. Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke oge oyi dị ka oge zuru oke iji chetara ndị njem na anyị na-echere ọbịbịa ha mgbe ọ bụla ha chere na ha dị njikere ime otú ahụ. "
Site na ọnụ ahịa azụmaahịa nke onye nrụpụta (MSRP) nke $34, akpakọbara kandụl “Bahamas” Homesick na mbipụta pastel dị jụụ nke na-egosipụta oke osimiri. Kandụl ọ bụla a wụsara n'aka na-enye oge ire ọkụ nke awa 60-80, na ikike pụrụ iche ibipụta ozi sitere na obi ruo n'ite kandụl na-enye onyinye bara uru karịsịa (+$15). Ndị na-eri nri nwere ike ịga na homesick.com/bahamas ka ha gwọọ onwe ha ma ọ bụ soro enyi ha chọrọ mgbapụ kerịta onyinye nke oge agwaetiti.
Lauren Lamagna, onye isi njikwa na Homesick kwuru, "N'ime afọ abụọ gara aga ka ndị njem na-eyigharịrị njem ha na ezumike ha, anyị ahụla mmụba nke ndị ahịa na-eji ihe na-esi ísì ụtọ na-enwe mmetụta njikọ na ụfọdụ ebe kachasị amasị ha gburugburu ụwa." . "Kedu ụzọ kacha mma isi wepụta ahụmịhe obodo anyị na-agụsi ike karịa site n'iso Bahamas na-emekọ ihe iji kpalie àgwàetiti ha mara mma na oke aja aja na-esi ísì ụtọ?"
Kandụl nwere obere “Bahamas” dị maka ịzụrụ malite na Jenụwarị 25, 2022 ka ọ na-abịa.
Ị dịla njikere ịhazi ezumike ahụ?
Oge oyi bụ ihe ngọpụ zuru oke maka ndị njem na-achọ mmanya mmanya Bahama Mama, ahụmahụ omenala bara ụba na ájá n'etiti mkpịsị ụkwụ ha - iji mee ka ọ bụrụ eziokwu. A ga-enye otu onye meriri na onye ọbịa nwere obere kandụl Homesick “The Bahamas”, ụgbọ elu na ụbọchị anọ, abalị atọ. Caerula Mar Club, ụlọ oriri na ọṅụṅụ okomoko dị n'agwaetiti South Andros na-emebibeghị ihe. A na-agbasa ebe ntụrụndụ ahụ n'ofe acres 10 zoro ezo nke dị n'akụkụ oke osimiri yana atụmatụ oghere dị n'èzí, ezigbo nri Caribbean, na otu n'ime osimiri ndị a na-emetụbeghị na Bahamas. Akpọrọ Caerula Mar Club aha otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma n'ụwa Condé Nast Onye Njem na 2020 na ghọtara na Njem + Ntụrụndụ 2021 Ndepụta ya Ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma n'ụwa. Iji mụtakwuo maka inye onyinye, gaa na a njikọ maka ohere iji merie!
Na-efe efe n'efu gaa n'agwaetiti ndị ahụ
Ugbu a bụ oge ịhazi ezumike na Bahamas ebe ebe a na-aga nwere onyinye iji dabara na mmefu ego na mmasị onye njem ọ bụla nwere ihe karịrị agwaetiti 16 nwere ụdị pụrụ iche maka ndị ọbịa ịhọrọ.
Ndị na-eri ihe ezumike na-achọsi ike ịhụ àgwàetiti ndị ahụ n'onwe ha nwere ike isi na Nassau gaa na Out Islands n'efu na-enye onyinye obere oge. Kedu ka o si arụ ọrụ? Site na 14 Febrụwarị 2022, ndị na-achọ obi ụtọ na ndị R&R aficionados nwere ike idebe oge ịnọ na nsonye. Ụlọ ọrụ nkwalite Bahama Out Islands Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị otu (opekempe 4 abalị) ma nata otu ụgbọ elu efu ma ọ bụ Bahamas Ferry tiketi si Nassau. Ndị na-ede akwụkwọ maka ọnụnọ abalị 7 ma ọ bụ karịa nwere ike ị nweta akara abụọ free tiketi ụgbọ elu ma ọ bụ Bahamas Ferry si n'isi obodo mba ahụ.
Maka ndụmọdụ ndị ọzọ maka ịhazi ezumike Bahamas ma ọ bụ ịmụtakwu maka ebe a na-aga, gaa na Bahamas.com.
Na ihe karịrị agwaetiti 700 na ọnụ mmiri na agwaetiti 16 pụrụ iche, Bahamas dị naanị 50 kilomita site n'ụsọ oké osimiri Florida, na-enye ụzọ mgbapụ dị mfe nke na-ebuga ndị njem na-adị kwa ụbọchị. Agwaetiti The Bahamas nwere ịkụ azụ, mmiri mmiri, ụgbọ mmiri na ọtụtụ puku kilomita nke mmiri kachasị mma na osimiri na-eche ezinụlọ, ndị di na nwunye na ndị njem. Nyochaa agwaetiti niile nwere inye bahamas.com ma ọ bụ na Facebook, YouTube or Instagram ịhụ ihe mere Ọ ka Mma na The Bahamas.
BAỊRỊ NA-ARỤ OBI
Tọrọ ntọala na 2016, Homesick bụ ihe na-esi ísì ụtọ na ụdị ndụ nke na-emepụta ezigbo ngwaahịa ejiri aka wụsa na-adọta ike nke ísì iji kpalie ncheta ndị mmadụ, ebe na oge. Ndị otu ndị na-akọ akụkọ, ndị na-ahụ maka ihe na-esi ísì ụtọ na ndị na-egwu ihe na-emekọ ihe ọnụ na obodo ndị nwere mmasị na-enyocha ma mepụta isi ísì ụtọ ọ bụla. Emere site na ngwakọta soy waks sitere n'okike yana wicks owu na-esi ísì ụtọ na mmanụ na-esi ísì ụtọ, kandụl anyị anaghị egbu egbu ma enweghị ndu, rọba, paraben, petroleum ma ọ bụ phthalates. Iji mụtakwuo, biko gaa na homesick.com.
Ịgụ ụlọ bụ akụkụ nke Win Brands Group (Win), onye na-eduga onye nwe lekwasịrị anya ngwaahịa, ụdị ndị ahịa na-ebuga ndị ahịa ha obi ụtọ na ahụmịhe dị egwu. Na mgbakwunye na Homesick, Pọtụfoliyo Win ugbu a gụnyere ihe ndị masịrị ya QALO (mgbanaka agbamakwụkwọ silicon na ngwa) na ndọda ( blanketị dị arọ mbụ).
Caribbean Condé Nast Condé Nast Onye Njem Bahamas
February 23, 2022 na 08: 05
Ekelere nke ukwuu, akọwara nke ọma yana nnukwu nkọwa. Daalụ maka nnukwu mbọ dị otú ahụ. Enwere m echiche doro anya gbasara isiokwu a. Ọ masịrị m ịgụ akwụkwọ a nke ọma iji chọọ ide akụkọ a magburu onwe ya na ntinye aka na-enye aka ekele maka ịkekọrịta.